USB Muurayi: Software Imwe nzira muLinux | Linux Vakapindwa muropa
USB Muurayi: software imwe muLinux
USB madoko Izvo pasina mubvunzo ndeimwe yeanonyanya kushandiswa nhasi, zvichitibvumidza yakanaka yekuchinjisa mwero yekubatanidza zvigadzirwa zvemarudzi ese kana kubhadharisa zvimwe zvishandiso nebhatiri. Ngazvive sezvazvingaite, ese makomputa emazuva ano, kunyangwe zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi, atove neayo kana akawanda USB-mhando madoko pakati pavo repertoire yekubatana.
Ndokusaka mapurojekiti ekugadzira zvigadzirwa zvemhando idzi dzezviteshi zvakawedzera, kusanganisira zvinokuvadza zvakanyanya senge iye USB Muurayi izvo zvirokwazvo iwe uchave waona nhau munetiweki. Chaizvoizvo idunhu rinoparadza michina munguva pfupi uye inosanganiswa ne USB. Mumaoko evamwe, chingave chombo chakanaka chekuparadza masisitimu achivafukidza sedanda risingakuvadzi reUSB.
Kushanda kwayo kuri nyore, iyo capacitor iri kuchaja ne -200v yezvazvino zvazvino kana yakabatana uye yatanga kubhadharisa pachiteshi ichiita kuti mutero ufambe nemumativi emidziyo kwavakabatana uye nekuiparadza ... Mumasekonzi mashoma michina yacho yakanyatso kukangwa nekuwandisa kune iyo USB Killer anoitonga, ichigadzira kukuvara kusingagadzirisike. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ichi chigadzirwa, iwe uchawana yakawanda ruzivo pane iyo mambure. Asi pano tiri kuzoratidza dzimwe nzira dzekuparadza dzisingade Hardware.
Pachikuva chinoshamisa GitHub Iwe unogona kuwana sosi kodhi dzemarudzi ese, nhamba hombe yemapurojekiti akavhurika anonakidza Pakati pavo pane USBKill script ku "paradza" komputa iyo painomhanya. Muchokwadi, zvazvinoita kunonyora zvirimo dhiraidhi, kusiya komputa isingashandisike kana password iro raizoda kubviswa kweruzivo rwusina kuiswa. Mune mamwe mazwi, inoshanda seyudzikunuro uye inoitwa kana chiitiko chikawanikwa mune USB chiteshi, kutangazve komputa uye kukumbira password yakati mushure mekutanga ... Zvinyorwa zvinoshanda kune BSD, Linux neMacOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » USB Muurayi: software imwe muLinux
ice modding akadaro
Pindura kune icemodding
Izvo hazvinyatso kunyorera yako hard drive (izvo zvinotora nguva yakareba), iwe unofanirwa kuve uine iyo data yakavharidzirwa sezvainogona kuverenga pane yayo github
«» [!] Zvakakosha: Ita shuwa kushandisa disk encryption kune ese maforodha ane ruzivo iwe rwaunoda kuve hwakavanzika. Zvikasadaro vanozozviwana zvakadaro. Yakazara disk encryption ndiyo yakapusa uye yechokwadi sarudzo kana iripo »»
Pindura kuna andriu
Ndozvandaifunga here, iyo MBR ichanyora here?
Ukuu: iko kunyorera kuchakubvumidza iwe kuisa uye kugadzirisa iyo Linux kernel nyore
Ubuntu 17.04 budiriro yatotanga